Iindaba-Ulwahlulo lwe-Co2 Laser Treatment Vs. UkuBekwa kwakhona kweLaser ye-Erbium
Unyango lwe-Co2 Laser Treatment Vs. UkuBekwa kwakhona kweLaser ye-Erbium
Ulwahlulo lwe-CO2 yeLaser yokuBekwa kwakhona
Isebenza njani: Fractional carbon dioxide (CO2) izixhobo zokuphinda zisebenzise i-laser zisebenzisa ukukhanya kwe-infrared okuhanjiswa ngetyhubhu egcwele icarbon dioxide ukwenza amanxeba emicroothermal kwizicubu ekujoliswe kuzo. Njengoko ukukhanya kufunxwa lulusu, izicwili ziyaphefumlwa, oko kukhokelela ekususweni kweeseli zolusu ezindala nezonakeleyo kumaleko wangaphandle wendawo enyangiweyo. Umonakalo oshushu obangelwa yi-laser ikwenze isivumelwano se-collagen esele ikho, eqinisa ulusu kwaye inyuse imveliso entsha ye-collagen ecaleni kwesipikisi ekuhlaziyweni kweseli okunempilo.
Iinkonzo kunye neengxaki: Ngelixa kungenziwanga utyando, le ndlela yonyango ihlasela ngakumbi kunonyango oluninzi oluvela kunyango, olunokuthi luguqulele kwiziphumo ezibonakalayo. Oko bekutshiwo, inyani yokuba iyangena ngakumbi ikwathetha ukuba ukuhlala ngokwenxalenye okanye ngokupheleleyo kunokuba yimfuneko kwisigulana sentuthuzelo kunye namaxesha onyango aqhelekileyo aphakathi kwe-60 ukuya kwi-90 yemizuzu. Ulusu luya kuba bomvu kwaye lufudumale ngaphandle kwebala, kwaye ubuncinci kwiveki yexesha lokuphumla kulindeleke.
Ukungqinelana: Kukho ukungqinelana okuqhelekileyo, njengosulelo olusebenzayo kwindawo yonyango oyifunayo. Ukongeza, abaguli abasebenzisa i-isotretinoin kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo kufuneka balinde ukunyangwa. Ukuveliswa kwakhona kwe-laser ye-CO2 ayikukhuthazwa ukuba ibe ziindidi zesikhumba esimnyama.
UkuBekwa kwakhona kweLaser ye-Erbium
Isebenza njani: I-Erbium, okanye i-YAG, ii-lasers zisebenzisa ukukhanya kwe-infrared ukuhambisa amandla obushushu asezantsi ngaphantsi komphezulu wolusu. Ukuqhekeka kwe-erbium laser ephinda iphindaphindeke kudala iincindi ezincinci zomzimba (ukwenzakala) kwi-dermis, umaleko ophakathi kwesikhumba, i-collagen eyonakalisayo kunye neeseli zolusu ezindala kunye nokukhuthaza ukuveliswa kwe-collagen entsha kunye nokuhlaziywa kweseli okunempilo. Ngamanye amagama, le ndlela yonyango yenza uhlobo lolawulo lwethishu olulawulwayo ukunyanga nokuphilisa ulusu olonakeleyo ukuphucula ubume besikhumba, ithoni, kunye nokomelela.
Iinkonzo kunye neengxaki: Unyango lwe-erbium laser ye-Fractional ilunge ngakumbi kwizigulana ezindala, kuba, xa kuthelekiswa ne-microneedling, zijolise kwizicubu ezinzulu ngaphantsi komphezulu wokuphucula imveliso ye-collagen. Nangona kunjalo, akukho sikhokelo siqinisekileyo sokumisela ukuba ngubani onokuba mncinci kakhulu kunyango oluthile. Olu nyango lukwafuna ixesha eliphantsi elibomvu kunye nobomvu obuhlala iintsuku ezininzi. Unyango lwe-Erbium ye-laser yokwahlulahlula ayilunganga iithoni zolusu ezimnyama ngenxa yomngcipheko omkhulu wokutshintsha kombala.
Ukungqinelana: Ngenxa yokuba i-lasers ifudumeza ulusu, kukho iziphumo ebezingalindelekanga ezininzi ekufuneka ziqwalaselwe, kubandakanya neenkxalabo ngokubhekisele kwi-hyperpigmentation yasemva kokuvuvukala, ecaleni kwexesha lokuphumla kunye nokhathalelo lwasemva konyango.
Ixesha Post: Oct-20-2020